Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Azia Atsinanana tamin’ny Jona 2015
Azia Atsinanana · Jona, 2015
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Jona, 2015
Inona no Tokony Ataon'i Singapaora Manoloana ny Krizin'ny Mpitsoa-ponenana Rohingya?
Singapaoro05 Jona 2015
Tsy taitra i Singapaora nandritra ny krizin'ny mpitsoa-ponenana Rohingya ao Azia Atsimo Atsinanana kanefa nihaona mba hikaro-bahaolana ireo mpitarika ny firenena manodidina. Saingy tokony hanao zavatra ve ny firenena?
Thailandy04 Jona 2015
Filipina04 Jona 2015
Singapaoro04 Jona 2015
"Inona no mason-tsivana hanapahana hevitra hoe tsy nanaraka ny fepetra sy faritra napetraka ny asa iray? Izany eo ihany, fa maninona no tsy tokony ho afaka hiahy tena ho azo amidy amin'ny fomba maharitra ny taokanto tsara?"
Myanmar (Birmania)04 Jona 2015
Hampangatsiaka Ireo Tsikera Ny Fanombohan'ny Pôlisin'ny Aterineto Ao Shina Ny ‘Fitsirihana Ny Resaka’
Shina03 Jona 2015
Ny fanombohana fandaharan'asa "Pôlisy Mpitsirika ny Aterineto sy ny Fampiharana ny Lalàna", dia mitaky ezaka mirindra bebe kokoa amin'ny fanamelohana ny teny aty amin'ny Aterineto.
Thailandy02 Jona 2015
Tsy ao anaty fitondrana amin'ny tany misy hotakotaka intsony i Thailandy, nefa misy lalàna vaovao momba ny fiarovana nanome fahefana mivelatra sy tsy voafetra ho an'ny miaramila ao anatin'ny governemanta sivily.
‘Vehivavy Mavo Volo Silantsilana’ Toy ny Ahoana No Mety Mitovy Amin'i Dalai Lama
Hong Kong (Shina)02 Jona 2015
Nilaza ny Dalai Lama fa mety hiverina ho ‘vehivavy mavo volo silantsilana’ izy, na mety tsy hiverina hiaina mihitsy aza; nahatonga aingam-panahy ho an'ireo mpanao sarimiaina avy any Hong Kong sy Taiwan izany.
Sary Meva Avy Amin'ny Fipoahana Volkano Tao Amin'ny Nosy Japone Kuchinoerabu-jima
Japana02 Jona 2015
Zazalahy iray no nahavita naka ho anaty lahatsary ny zava-nitranga, fotoana fohy monja taorian'ny fipoahana volkano tampoka tao amin'ny nosy iray any atsimo andrefan'i Japana. Ho an'ireo mponina manakaiky an'i Kagoshima, efa lasa zavatra iainana ny resaka volkano.
Filipina01 Jona 2015